Ugwu Jizera - PetrPikora.com
PetrPikora.com on Mee 2, 2018
Giant Mountains (German Isergebirge, Polish Góry Izerskie, ịkwa ụda nke a na-akpọ Jizerky) bụ mpaghara geomorphological na ugwu ugwu nke Czech Republic. A na-akpọ ugwu dị n'akụkụ osimiri Jizera, nke dị na mkpọda nke Smrk, ugwu kasị elu na Czech nke akụkụ ugwu. A na-ele ya anya dị ka ebe ọdịda anyanwụ nke Oké Osimiri Ukwu. Akụkụ ya dị na Poland, ebe ọnụ ọgụgụ kasị elu nke Ugwu Jizerské nile bụ Wysoka Kopa (1126 m).
Around ugwu, bụ obodo nke Liberec, Frydlant, Raspenava, New Town n'okpuru spruce, Świeradów-Zdroj, Szklarska Poreba, Desna, Tanvald na Jablonec nad Nisou. N'ihe gbasara nkewa mpaghara, akụkụ Czech nke akụkụ ugwu dị na Liberec, Jablonec nad Nisou na Semily Liberec distrikti.
kwa Giant Mountains na-ji mara esisịt na ọnụ ọgụgụ kasị elu ebe, si otú akpụ elu-dina dị larịị nke ebili konkiri ọnụ ọnụ na nke na-emighị emi ịda mbà n'obi nwere ọtụtụ bogs.
Giant Mountains iyi tojubigara ókè, ndị na-esonụ geomorphological nkeji (site n'ebe ugwu dị malite) Frýdlantská Upland, Kotlina Jeleniogórska, Giant Krkonošské foothills ještěd-kozákov riiji na Žitava efere. Site gburugburu nkeji (na wezụga nke Giant Mountains) bụ Giant Mountains kewapụ iche. Ka ihe atụ, n'ebe ugwu ná mkpọda Frydlantske uplands, na-ebili n'elu ndagwurugwu Smědá nwere a ikwu elu 500 m. Northeast Jizersky ka adahade elu n'elu ndagwurugwu riiji na Kwisa Small Kamienna. Ọ bụ ezie na ndịda ugwu na-aga were were n'ime Liberec Basin, ma a na-emechi 18 km ogologo riiji Černostudniční.
The Jizera Mountains ngụkọta nke 28 puku (ọnụ ọnụ na a elu nke n'elu 1000 mita na a ma ama nke n'elu 5 mita). Ụfọdụ na isi mmalite eme ma White ọnwụ (1007 m) dina n'etiti pigeonloft na Montenegro millirem (m 1003) emi odude n'ebe ndịda nke Jizera ma ọ bụ spruce, obere ọnụ ọgụgụ kasị elu Smrku dị n'azụ Polish-Czech ókè. Ọzọ, ụfọdụ na-ekwu Świeradowiec, ma nke a bụ a iche iche ugwu, ma naanị spočinek Lužce.
Na mpaghara Czechoslovakia n'ugwu, e nwere 15 nke ọtụtụ puku mmadụ, ọtụtụ n'ime ha ejikwara ụdị nkume dị iche iche. Ha nwekwara ezi miri oche - 7 nke ha nwere a ma ama (elu si oche) dịkarịa ala 100 m. The Polish akụkụ bụ 13 puku, gụnyere ndị kasị elu Wysoka Kopa, ha ụdị, Otú ọ dị, bụ dị iche iche, na oké nkume formations na-ukwuu na-erughị, ugwu ndị ka ukwuu n'ime ewepụghị pates na ihe na-emighị emi. E wezụga Wysoke Kopy, enweghị ọnụ ọgụgụ kachasị elu karịa 60 mita.
Nchịkọta na-esonụ na-edepụta ọtụtụ puku elu ugwu, prominences na iche. N'ụzọ na-akpali mmasị, Jizera nwere ọkwá dị elu karịa Smrk, ugwu kachasị elu na Czech nke akụkụ ugwu. Kama nke ahụ, Smrk dị elu karịa Wysok Kopa, ugwu kachasị elu nke Jizera dum. Ihe ọzọ mara mma bụ Černý vrch, nke dị elu na 1026 m na 17. elu, ma ọ bụ 4. onye kasị mara amara otu puku nke Jizera.
Site na njedebe nke proteozoic site na Asush wrinkle, oke ugwu nke a na-amalite site na mmekpa ahụ na ịma mma bilitere n'ókèala nke Jizi ugwu taa. Otú ọ dị, n'oge iri afọ nke 200 na-esonụ, ugwu a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe kwekọrọ na ya, nakwa na Silurian, osimiri ahụ kpuchiri ebe a. N'ime oge a nile, plutons abụọ, nke taa na-abụ ntọala nke ugwu, pụtara n'elu. A na-ejikọta Basilica na otu ngọngọ site na mpịakọta nke kaleon. Ebu ụzọ nke abụọ mepụtara ọdịdị nke oge a: nsụgharị Hercynian na nke Saxon na Tertiary. Ọ bụ n'oge a na enwere ọkpụkpụ na ha Giant Mountains pụta ìhè. A na-echekwa mkpọda mgbapụta, dịka ọmụmaatụ, na ụkwụ ugwu nke Špičák, Ořešník, Frýdlantské agha.
Nkume kachasị elu nke taa bụ nkume nkume granite - granite. Ha rutere n'elu site n'igosi plutons abụọ. Site ndị a konkiri ozu bụ okenye Lausitz pluton, nke gbatịrị n'ugwu ke edere nke a na-akpọ Rumburk konkiri. N'oge ya solidifying pluton tọghata a nsogbu na okpomọkụ okenye nkume - wepụrụ ebubo - on schist bụ ihe atụ, mica warara ugwu na n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ. Na ndị a svor posterior ka mineralization (ego nke tin na New Town n'okpuru spruce) na mgbe e mesịrị ka gush ịnweta iyi (Libverda, Czerniawa Zdrój Świeradów-isi mmalite). Limestone na dolomite akpụ Calcium Hill na Raspenavy a tọghatara ka marble. Nkume kachasị gbanwee bụ ebe ndị Jizera na-etolite Ridge High nke Jizera na Smrk Mountain. N'elu New Town, e nwere nkwụnye ego nke slate cristalline - leptinate. Metamorphic nkume nwekwara Železnobrodská shales na quartzites (White Rock na Prichovice).
Nke abụọ, Krkonoše-Jizerská pluton bụ ebe si Chrastava ruo Sněžka. E tinyewo ya na carbonite na ihe nchịkọta ya bụ ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-arụ ọrụ na Jizerskohorské rock. N'ugwu ndị dị elu, mmiri iyi mmiri kwukwara, karịsịa basalt. Ihe kachasị elu bụ Bukovec nad Jizerkou na Buková dị nso Jiřetín. N'ime nkeji iri na ise, ugwu ugwu Jizera na-ekpuchi nanị ebe, ikuku gọọmenti etiti na-akwụsị na ebe ugwu ha. Ka o sina dị, ógbè dị n'ugwu Jizera kpaliri ya. N'ihi ntu oyi na-ekpo ọkụ, e nwere ngalaba dịka ụlọ ụlọ oyi na mgbidi mgbidi. Akuku nkume ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ n'ugwu bụ ọkwá nkume, ihe mgbapụta na nkume dị egwu.
N'ihi ebe ha nọ, ugwu ugwu Jizera nwere nnukwu mmiri nke mmiri mmiri. Ugwu nke ugwu ahụ na-eduga n'etiti ókèetiti Oké Osimiri Baltic na Oké Osimiri Ugwu. Site n'ebe ọdịda anyanwụ na n'ebe ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ, mmiri nke Lužická Nisa na-agafe mmiri Zittau banye n'Oké Osimiri Baltic. Otu n'ime ndị na-asọpụrụ ha bụ Směda, na-asọga n'ebe ugwu nke ugwu ugwu ahụ. Ndị ọzọ dị mkpa bụ ndị nlekọta bụ Jeřice, Řasnice na Lomnice. N'etiti Polish, osimiri dị iche iche bụ Bobr, Kamienna na Kwisa. N'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke ebe ahụ, Jizerou rutere Elbe ma si otú ahụ gaa Oké Osimiri Ugwu. Ihe kacha mkpa ọ na-azụ bụ Kamenice.
Mmiri mmiri mmiri dị oké mkpa maka ọchịchị mmiri. Ogwu nke ndi ozo, nke bu ugwu kachasi elu, nwere ike ijide mmiri ozuzo buru ibu n'ime ya - rue ugbo iri abuo. Nke a na-emetụta evaporation na ntinyeghari nke ugwu microclimate. N'otu oge ahụ, ọ na-egbusi oge mmiri na-agba ọsọ.
Naanị mmiri mmiri nke ugwu Jizera bụ ọdọ mmiri na ọdọ mmiri. Na njedebe nke 19. na narị afọ, ọ bụ nanị ntakịrị obere mmiri e ji wuo mmiri ka e wuru n'ugwu iji jee ozi na mpempe akwụkwọ. Mgbe iju mmiri nke 29. 7. 1897, mgbe e nwere ndekọ nke mmiri ozuzo na Jizerské hory, kpebiri ichebe ọtụtụ mmiri ozuzo ndị ọzọ iji chebe ya pụọ ​​na ihe omume ndị ọzọ. Maka ulo oru ohuru nke mmiri na-achikota osimiri na igbanye mmiri ozuzo na Ogologo Mmiri, Prọfesọ Otto Intza mepụtara isii dams. Ọ bụ ndagwurugwu ndagwurugwu mbụ na Czech Republic, nke na-ebute nchegbu n'oge ya. N'ikpeazụ, e wubere ise n'ime nnukwu ihe ndị a na-edozi mmiri, e wubeghịkwa ọdọ mmiri ahụ na Jeřice. Ọdụ mmiri Harcov, Ọdụ mmiri Bedrichov, Dam Mníšecká, Mlýnická Dam na Jablonecka Dam zuru. Mmiri abụọ ọzọ - oge a fesara - na mmiri mmiri Jizera dị na 1915. Otu n'ime ha, otu mmiri mmiri dị na White Desna, nwere mwute gbajiri n'afọ ọzọ mgbe e mesịrị. Nke abụọ, Ebe nchekwa mmiri, na-eje ozi ugbu a dị ka mmiri iyi nke Jablonec nad Nisou. Isi iyi nke mmiri maka Liberec na Českolipsko bụ (ọzọ a tụfuru) mmiri mmiri Josefův Důl, nke e wuru na 1976-82 afọ.
Atụmatụ nke Ngalaba Ugbo nke Czech Republic gụnyere usoro atọ na atọ na-emepụta mgbapụta na gburugburu Hejnice. Otú ọ dị, dị ka ọtụtụ echiche si dị, ọ dịghị ihe kpatara ya iji wuo ha, yana idei mmiri na mgbanwe dị ukwuu na ebe ndị echedoro ugwu.